Trump: WHO waa 'eey uu wad wato Shiinaha'
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay Ha'yadda Caafimaadka Adduunka inay tahay 'eey uu wad wato Shiinaha', hadalka Trump ayaa imaanaya xilli WHO uu u socdo kulan labo maalmood qaadanaya oo ay uga hadlayaan safmarka feyraska Korona.
Wuxuu sheegay in 'WHO ay bixisay talooyin qaab daran oo qalad ah isla markaana garab lagu siinayo Shiinaha'
Trump oo isagu lagu dhaleeceeyay sida uu ula tacaalay safmarka waxaa uu marar badan ku eedeeyay Ha'yadda Caafimaadka Adduunka inay ku guuldareysatay in caalamka ay u fidiso wacyigelin buuxdo isla markaana ay u eexatay Shiinaha.
Mareykanka wuxuu horey u hakiyay maalgelintii uu siin jiray Ha'yadda Caafimaadka ee Adduunka, wuxuuna wadaa baaritaanno ku aadan sida Ha'yadda u maareysay safmarka.
Markii uu bilowday shirka WHO, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wuxuu ka sheegay in Shiinaha uu yahay mid ''furfuran oo caddaalad ah', wuxuuna ku adkeystay in baaritaan kasta la sameyn karo marka lagu guuleysta xakameynta feyraska Korona.
Dhanka kale, madaxweyne Trump wuxuu warqad u qoray madaxa Ha'yadda Caafimaadka Adduunka oo uu ugu hanjabay in Mareykanka uu si joogto ah kala noqon doono maalgelintii uu siin jiray Ha'yadda.
Wuxuu u qabtay muddo 30 cisho ah si ay usoo 'bandhigaan dadaallo wax ku ool ah oo ka dhan feyraska'